Kitchen cellulose Ogbo, abịakọrọ cellulose Ogbo - Neco
Ningbo neco ogbo technology co., Ltd e hiwere na 2012. Ọ bụ ihe na mbupụ-oriebred n'ichepụta factory aku na ọkachamara mmepụta na seles nke cellulose ogbo nkanka na iberibe.
The factory ekpuchi a ụlọ nke ebe 25000M2 na ihe karịrị 100 ndị ọrụ. Cellulose ogbo esesịn ebe iru, CA65, FSC asambodo. E nwere otu nnukwu ụlọ nyocha, àgwà na nchekwa nke ngwaahịa na-nditịm na-achịkwa.
ỌzọNingbo Neco Ogbo Technology Co., Ltd.
ezi absorbency nke mmiri na inogide
eji maka Auto na achitectural ebe
ọdịdị ihu ogbo
adụ na inogide
Non ọkọ Scrubber 70-0131-21
Non ọkọ Scrubber 70-0129-21
Non ọkọ Scrubber 70-0122-21
Non ọkọ Scrubber 70-0119-41
Handy Ogbo 70-0134-21
Ọ dịghị ihe dị mma karịa na-ejide ya n'aka gị! Pịa n'okpuru
Email anyị na-amụta ihe banyere gị ngwaahịa
Nweta a Free Broshọ na Samples
Anyị Ga-aga Ịgbaso Gosi Na Year 2020
Ningbo Neco Houseware Co., Ltd na Ningbo Neco Ogbo Technology ga-aga na-esonụ na-egosi na afọ 2020. Anyị ga-ụfọdụ ndị ọhụrụ na ngwaahịa ndị na-abịa na-egosi. 1.Ambiente na Frankfort Germany si 7th Feb na 11 Feb 2020. Booth dịghị. bụ 10.4D41. 2.HIA na Chicago USA si 14 March na 17 March 202 ...
Na pede mi liquet
Tọrọ ntọala na August 2001, Ningbo Neco ezinụlọ ngwaahịa Co., Ltd. bụ mbupụ na-edebere ndị emeputa ọkachamara na mmepụta na ọrịre nke nhicha ngwaahịa na ezinụlọ kwa ụbọchị dị mkpa. Na presentthe ụlọ ọrụ na-ekpuchi ebe ndị 16500m2 ...
expandable Ogbo, oval cellulose Kitchen Ogbo , cellulose abịakọrọ Ogbo , Abịakọrọ Ogbo cellulose, Abịakọrọ cellulose Ihu Ogbo, abịakọrọ cellulose nhicha Ogbo ,